Ny Mombamomban’ny Tontolon’ny Blaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Ny Mombamomban'ny Tontolon'ny Blaogy Toniziana
Voadika ny 18 Novambra 2018 4:33 GMT
Ny tontolon'ny blaogy Toniziana angamba no isan'ireo tontolon'ny blaogy mavitrika sy mitombo haingana indrindra ao amin'ny tontolo Arabo. Amin'izao fotoana izao, ahitana blaogy 70 mavitrika ao amin'izany, tantanan'ny Toniziana any Tonizia, Frantsa, Kanadà, Etazonia, Arabia Saodita ary Romania.
Amboara fitahirizana sy fizahana izay manambatra ny ankamaroan'ireo blaogy ireo ny TN-Blogs, ary asongadin'ny mpanangona iray izay manangona sy mamoaka lahatsoratra avy amin'ireo blaogy ireo.
Amin'ireo blaogy ireo, 30% fotsiny no an'ny vehivavy blaogera.
18 ka hatramin'ny 30 taona any ho any ny taonan'ireo blaogera Toniziana.
Amin'ny teny Frantsay ny ankamaroan'ireo blaogy Toniziana, izay 11 fotsiny no amin'ny teny Anglisy ary 2 amin'ny teny Arabo.
Raha ny fampiantranoana no asiana resaka, ampiantranoan'ny tolotra fitoraham-blaogy maimaimpoana ny ankamaroan'ireo blaogy Toniziana, indrindra fa ny blogger ary avy eo ny hautetfort..
Mandrakotra indrindra ireo olana manokana, raharaha ara-tsosialy, fanehoankevitra manoloana ny vaovao sy eritreritra ary hevitra maro isan-karazany ireo lohahevitra resahin'ny ankamaroan'ireo blaogy ireo.
Mifandray ny ankamaroan'ireo blaogera Toniziana ary mamela fanehoankevitra sy mitarika resaka mikasika ny fetran'ny tontolon'ny blaogy Toniziana, manamboatra karazana fihetsehampo iraisanà vondrompiarahamonina izay mandray ireo blaogera vaovao ary mankahery azy ireo mba hanohy lalandava ny fitorahana blaogy.
Atao isam-bolana ny fihaonana blaogera ho toy ny fahafahana ho an'ireo blaogera mba hifankahafantarana, hitarihana resaka an-tambajotra sasantsasany ho ao amin'ny tontolo tena izy, hiresaka mikasika ny fitorahana blaogy sy ny fomba fanaparitahana izany, no sady miala voly .